ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲအပြီး ဘာတွေ ထူးခြားချက်ရှိခဲ့လဲ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲအပြီး ထူးခြားချက်များ
20 Sep 2018 . 3:07 PM
အင်္ဂါနေ့တုန်းက စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်း ထူးခြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ ဖမ်းစားခဲ့ပြန်တယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်း တိုက်စစ်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကစားသမားဘ၀ (၁၁)ကြိမ်မြောက် အနီကတ်ပြသခံခဲ့ရတာ၊ မန်စီးတီးအသင်း အိမ်ကွင်းမှာ လိုင်ယွန်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ အပါအ၀င် ထူးခြားချက်တွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲအပြီး ထူးခြားချက်တွေကတော့ . . .
မန်စီးတီး – မန်စီးတီးအသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်အဖွင့်ပွဲအပါအ၀င် နောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ (၄)ပွဲဆက် ရှုံးခဲ့တာက ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးပါပဲ။
ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗား Bernardo Silva – မန်စီးတီး ကွင်းလယ်လူ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မန်စီးတီးအသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ (၉)ဂိုးသွင်းယူထားပြီး သူ့ထက် ဂိုးပိုများတာဆိုလို့ အဂွဲရိုး Aguero (၂၀ဂိုး)သာ ရှိပါတော့တယ်။
မန်စီးတီး – မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်နောက်ဆုံး (၄၂)ပွဲမှာ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲ တစ်ပွဲမှ မရှိပါဘူး။
တာဂလီယာဖီဂို Tagliafico – AEK အေသင်ကို (၃)ဂိုးပြတ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အေဂျက်စ်အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနား ကစားသမား တာဂလီယာဖီကိုရဲ့ ဂိုးဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် အာဂျင်တီးနားကစားသမားတွေ သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုး(၅၀၀)ပြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နာဂယ်လ်စမန်း Nagelsmann – အသက်(၃၁)နှစ်၊ (၅၈)ရက်ပဲရှိသေးတဲ့ ဟော်ဖန်ဟင်မ်နည်းပြ နာဂယ်လ်စမန်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး နည်းပြအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရီးယဲလ် – ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြိုင်ပွဲစုံမှာ ရီးယဲလ်အသင်း ကစားသမားတွေလောက် ဖရီးကစ်ကန်ခွင့်၊ ဖရီးကစ်ဂိုး သွင်းယူနိုင်တဲ့သူ မရှိဘဲ ကစားသမားဟောင်း စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo (၉ကြိမ်၊ ၀ ဂိုး)၊ ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale (၆ကြိမ်၊ ၀ ဂိုး)၊ အဆန်စီယို Asensio (၅ကြိမ်၊ ၀ ဂိုး)၊ အစ္စကို Isco (၄ကြိမ်၊ ၂ ဂိုး)တို့က ကန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
REF: Opta Joe
Photo: Opta Joe Twitter
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုပှဲအပွီး ထူးခွားခကျြမြား
အင်ျဂါနတေု့နျးက စိတျဝငျစားစရာဖွဈရပျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲတှကေတော့ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာလညျး ထူးခွားတဲ့အခကျြတှနေဲ့ ဖမျးစားခဲ့ပွနျတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျး တိုကျစဈကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကစားသမားဘ၀ (၁၁)ကွိမျမွောကျ အနီကတျပွသခံခဲ့ရတာ၊ မနျစီးတီးအသငျး အိမျကှငျးမှာ လိုငျယှနျကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာ အပါအဝငျ ထူးခွားခကျြတှေ အမြားကွီးဖွဈခဲ့တယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲအပွီး ထူးခွားခကျြတှကေတော့ . . .
မနျစီးတီး – မနျစီးတီးအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျ ဒီရာသီခနျြပီယံလိဂျအဖှငျ့ပှဲအပါအဝငျ နောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အင်ျဂလိပျကလပျအသငျးတဈသငျး ခနျြပီယံလိဂျမှာ (၄)ပှဲဆကျ ရှုံးခဲ့တာက ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးပါပဲ။
ဘာနာဒိုဆေးလျဗား Bernardo Silva – မနျစီးတီး ကှငျးလယျလူ ဘာနာဒိုဆေးလျဗားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး မနျစီးတီးအသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ (၉)ဂိုးသှငျးယူထားပွီး သူ့ထကျ ဂိုးပိုမြားတာဆိုလို့ အဂှဲရိုး Aguero (၂၀ဂိုး)သာ ရှိပါတော့တယျ။
မနျစီးတီး – မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျနောကျဆုံး (၄၂)ပှဲမှာ ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့တဲ့ပှဲ တဈပှဲမှ မရှိပါဘူး။
တာဂလီယာဖီဂို Tagliafico – AEK အသေငျကို (၃)ဂိုးပွတျ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အဂေကျြဈအသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ အာဂငျြတီးနား ကစားသမား တာဂလီယာဖီကိုရဲ့ ဂိုးဟာ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ အာဂငျြတီးနားကစားသမားတှေ သှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုး(၅၀၀)ပွညျ့ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
နာဂယျလျစမနျး Nagelsmann – အသကျ(၃၁)နှဈ၊ (၅၈)ရကျပဲရှိသေးတဲ့ ဟျောဖနျဟငျမျနညျးပွ နာဂယျလျစမနျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ အသကျအငယျဆုံး နညျးပွအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
ရီးယဲလျ – ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး ပွိုငျပှဲစုံမှာ ရီးယဲလျအသငျး ကစားသမားတှလေောကျ ဖရီးကဈကနျခှငျ့၊ ဖရီးကဈဂိုး သှငျးယူနိုငျတဲ့သူ မရှိဘဲ ကစားသမားဟောငျး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo (၉ကွိမျ၊ ၀ ဂိုး)၊ ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale (၆ကွိမျ၊ ၀ ဂိုး)၊ အဆနျစီယို Asensio (၅ကွိမျ၊ ၀ ဂိုး)၊ အစ်စကို Isco (၄ကွိမျ၊ ၂ ဂိုး)တို့က ကနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။